शक्तिशाली गृहमन्त्री बादल पुत्रको अर्को कर्तुत बाहिरियो ! – Daily NpNews
मुख्य पृष्ठ /समाचार/शक्तिशाली गृहमन्त्री बादल पुत्रको अर्को कर्तुत बाहिरियो !
शक्तिशाली गृहमन्त्री रामबहादुर थापा बादलका छोरा प्रतिक थापाको सेटिङमा काठमाडौं परिसरका एसएसपी श्याम ज्ञवालीको आठ महिनामै सरुवा भएको छ । गृह मन्त्रालयले शुक्रबार ३३ एसएसपीको सरुवा गर्दा धेरै जसोको अवधि पुगेर नै सरुवा भएको भएपनि काठमाडौं परिसरका एसएसपी श्याम ज्ञवालीको भने आठ महिनामै शक्तिशाली गृहमन्त्री बादलका छोरा प्रतिकको सेटिङमा सरुवा भएको हो ।उनको चलखेलका आधारमा उनको सरुवा भएको पाइएको छ । उनको प्रतिकको सेटिङमा काठमाडौं परिसरमा एसएसपी अशोक सिंहलाई पठाइएको छ ।
ज्ञवालीबाट स्वार्थ पुरा नभएपछि उनलाई हटाउन प्रतिक पाँच महिनाअघिदेखि नै सक्रिय रहेको खुलासा भएको छ । अहिले आएर उनी सफल भएका छन् । एसएसपी सिंह कास्कीमा हुँदादेखि नै प्रतिकसँग सेटिङमा काम गर्दै आएका छन् । सिंहलाई एसएसपी बढुवामा पनि उनको भूमिका थियो । अहिले उनले नै सिंहलाई काठमाडौं परिसर लगेको स्रोत बताउँछ । सिंह धादिङमा उनी कारबाहीमा परी त्यहाँबाट हटेका थिए ।
त्यसो त काठमाडौं परिसरका एसएसपी ज्ञवालीसँग गृह नेतृत्व रुष्ट थियो । चाकडी गर्न नजान्ने भएकाले गृहमन्त्रीको टिम तथा गृहसचिव उनीसँग खुशी थिएनन् । त्यही कारण पनि उनको सरुवा भएको उच्च स्रोत बताउँछ । त्यो त, उनले पनि उत्कृष्ट काम भने गर्न सकेका थिएनन् ।त्यस्तै महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखामा पनि सेटिङकै आधारमा कमजोर कार्यक्षमता भएका जनक भट्टराईलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।गृह मन्त्रालयले शुक्रबार ३३ एसएसपीको सरुवा गरेको थियो ।- अनलाइनमार्ग